बैंकलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव- मूल्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्नुस् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
११ माघ २०७८, मंगलवार । January 25, 2022
बैंकलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव- मूल्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्नुस्
२४ फाल्गुन २०७३, मंगलवार ०९:५६
काठमाडौं, फागुन २४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेपालका बैंकहरुलाई मूल्यमा आधारित जनमूखि सेवा प्रवाह गर्न आव्हान गरेका छन् । काठमाडौंमा आायोजित ग्लोबल एलाईन्स फर बैंकिङ अन् भ्यालुज सम्मेदनको उद्धघाटन गर्दै उनले सो आव्हान गरेका हुन् ।
दाहालले भने, दीर्घकालिन विकास र समृद्धिको लागि बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर त्यसका लागि बैंकहरु जिम्मेवार, उत्तरदायी र मूल्यमान्यतामा आधारित सेवा प्रभाव गर्न तयार हुनु पर्दछ । उनले थपे, मूल्यमा आधारित सेवा प्रभाव गर्दा चुनौती र खतराहरु धेरै छन् । तर त्यसका लागि ठीक योजना तयार गरियो भने मात्र काम गर्न सकिन्छ । बढी भन्दा बढी जनता र समुदायसम्म पारदर्शिता, सामाजिक दायित्व र सेवा भावले बैंकहरु पुग्न सके मात्रै यस प्रकारका सम्मेलनको उपादेयता देखिने उनको विचार थियो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले नेपालमा वित्तीय उदारताको विकास बारे चर्चा गर्दै अहिले नयाँ चरणका प्रवेश गरेको बताए । बैंकिङ मूल्यहरुलाई केन्द्रमा राख्दै सेवा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थालाई सधैं सहयोग गर्ने नीति केन्द्रिय बैंकको रहेको जानकारी गराए । समाज विकास र वातावरणीय संरक्षणलाई समेत ध्यानमा राख्दै बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न यस्ता कार्यक्रमहरुले थप उत्साह थप्ने उनको धारणा छ ।
सो कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ, वातावरण विभागका उपकार्यकारी निर्देशक इब्राहिम थिवाको सन्देश वाचन गरेर सुनाईएको थियो । उक्त सन्देशमा उनले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ सेवा विस्तार हुँदै गरेको सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रकाशित : २४ फाल्गुन २०७३, मंगलवार ०९:५६
नेपाल बैंकको खुद मुनाफा १ अर्व ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँ
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालक श्रेष्ठले सम्हालिन् कार्यभार
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको नाफा ६० प्रतिशतले बढ्यो
एनआईसी एसिया बैंकका ३६ वटा शाखा तथा विस्तारित काउन्टर बन्द
एनआईसी एसिया बैंकको लाभांश प्रस्ताव रद्द
नेप्सेमा ४ लाख ७ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत
भक्तपुरमा आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द
खोप कार्ड हरायो ? यसो गर्नुस्
एनआईसी एशिया बैंकका ११ शाखा बन्द
एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको आइपीओ आउदै, कसको कति ?
कोरोना खोप लगाएकाले निःशुल्क लगानी व्यवस्थापन सेवा पाउने
६ महिनामा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात,ब्यापारघाटा ९ खर्ब नजिक
एनआईसी एशिया बैंकको नाफा साढे २ अर्ब